माइक्रोसफ्ट अज्योरको आधारभूत ज्ञान नेपालीमा - के हो क्लाउड कम्प्युटिंग? - Digitalample.com
Home/नेपाली/माइक्रोसफ्ट अज्योरको आधारभूत ज्ञान नेपालीमा – के हो क्लाउड कम्प्युटिंग?
क्लाउड कम्प्युटिंग भनेको कम्प्युटरीय सामग्री, स्टोरेज, सिपियु, सर्भर जस्ता उपकरणहरु भाडामा लिनु हो। यो प्रक्रिया इन्टरनेट को माध्यम बाट संचालन हुने गर्छ।
यी लेखहरुको संग्रहमा हामीले माइक्रोसफ्ट अज्योर को विभिन्न आधारभूत पक्षहरुको अध्ययन गर्ने छौँ। यी लेखहरु क्लाउड र अज्योरका बारेमा जान्न चाहने सबैका लागि ज्ञानमूलक छन्। पहिलै क्लाउड र अज्योरमा कुनै पनि ज्ञान नभएको अनुमान राख्दै यो लेखसंग्रह लेखिएको हो। यसर्थ, क्लाउडको बारेमा जान्न चाहने जोसुकैलाई यी लेखहरु लाभदायी हुन सक्छ। कुनै ढिलाई नगरी सुरु गरौँ।
के हो क्लाउड कम्प्युटिंग?
क्लाउड कम्प्युटिंगको बारेमा जान्नु भन्दा पहिले एउटा सानो उदाहरण हेरौं। हामीले आफ्नो घरमा बत्ति बाल्ने क्रममा मात्र एउटा स्वीचको प्रयोग गर्छौ। स्वीचको प्रयोग गर्नासाथ् बत्ति बल्छ। तर घरमा बत्ति बाल्नका लागि स्वीचले मात्र हुदैन। सुरुमा बिजुली को उत्पादन गर्नु पर्छ। त्येस बिजुली लाई तारको माध्यम बाट घरसम्म ल्याईपुराउनु पर्छ। सबै सर्किटहरु मिलाएपछि मात्र स्वीचको प्रयोग गर्दा बत्ति बल्छ। हामीले यो बत्ति बाल्ने प्रक्रियामा पर्ने सबै कामहरु आफै गर्न खोज्यौँ भने निकै कठिन हुने मात्र नभई महंगो पनि पर्न जान्छ। यस्तो अवस्था मा हामीले विद्युत प्रधिकरणलाई यी सबै कार्यको जिम्मा दिन्छौँ र आफुले प्रयोग गरेको अनुसार पैसा तिर्छौं। यसैगरी, कम्प्युटरको क्षत्रमा यदि हामीले कुनै नयाँ कम्पनी अथवा केहि नयाँ र ठुलो प्रकारको कार्य गर्न चाहन्छौँ भने हामीलाई हार्डवेयर, सफ्टवेयर, सर्भर आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि निकै खर्च, समय र रेखदेख गर्ने छुट्टै कर्मचारी को आवस्यकता पर्छ। त्यतिमात्र नभएर ति उपकरणहरुको समय समयमा परिक्षण र समस्याका समाधान गरिरहनु पर्छ। यसकारण सानो काम पुरा गर्न पनि धेरै कुराको ख्याल गर्नु पर्ने हुँदा निकै कष्ट पर्न जान्छ। यो समस्या को सजिलो समाधान के त? यसको उत्तर हो क्लाउड कम्प्युटिंग।
सामान्यतया: क्लाउड कम्प्युटिंग भनेको कम्प्युटरीय सामग्री, स्टोरेज, सिपियु, सर्भर जस्ता उपकरणहरु भाडामा लिनु हो। यो प्रक्रिया इन्टरनेट को माध्यम बाट संचालन हुने गर्छ। यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई केहि प्रकारको सेवा भाडा मा लिनुपर्यो भने माइक्रोसफ्ट अज्योर, अमेजन वेब सर्भिस जस्ता क्लाउडका बिक्रेताहरु संग इन्टरनेट को मार्फत भुक्तानी गरेर चाहिएजति सेवा लिन सक्छन। क्लाउड कम्प्युटिंग को खर्च आफुले प्रयोग गरेको सेवासुविधाको आधार मा निर्धारण हुन्छ। थोरै सेवा लिएमा थोरै खर्च निस्किन्छ भने धेरै सेवा लिएमा धेरै खर्च निस्किन्छ। यो खर्च निर्धारण प्रणालीले ग्राहकलाई निकै सजिलो बनाइदिन्छ। क्लाउडबाट सेवा लिँदा संरचनाको कुनै चिन्ता लिन आवस्यक हुदैन। बिजुली जस्तै जति प्रयोग गर्यो त्यति रकम भुक्तानी गर्दा पुग्छ। संरचनामा केहि समस्या आइपरेमा क्लाउड बिक्रेता जिम्मेवार हुन्छ र हाम्रो डाटा तथा उपकरणलाई केहि नोक्सान नहुने प्रबन्ध सुरुमै मिलाईदिएको हुन्छ। क्लाउडमा सेवा बढाउने र घटाउने प्रणालीको आजका दिनमा धेरै उपयोगिता हुन्छ। यसलाई राम्रोसंग बुझ्न एउटा सानो उदाहरण लिन सकिन्छ। मानौं कुनै एक संस्थाले अनलाइनका मार्फत समान बेच्ने गर्छ। यस व्यापारमा कुनै समय धेरै अर्डर हुने र कुनै समय थोरै अर्डर हुने गर्छ। संस्थासंग भएको संरचना हेर्ने हो भने कहिले भार धेरै र कहिले कम पर्ने गर्छ। कुनै समय अत्याधिक भार परेको बेला सिस्टमले काम गर्न नसक्ने ठुलो सम्भावना हुन्छ जसकारण नोक्सान हुन सक्छ। त्यस समस्यालाई समाधान गर्न संरचनामा उपकरणहरु थप्नु पर्छ। सो गर्दा खर्छ धेरै लाग्ने गर्छ। उपकरण थापेपनि भार कम भाको बेला त्येसको व्यवस्थापन र समयसमयमा परिक्षण गरिरहनु पर्छ। यो तरिका लाभदायी हुदैन। यदि यस संस्थाले क्लाउडबाट सेवा लिन्छ भने भार धेरै भाको बेला उपकरण भाडामा लिने र कम भाको बेला नचलाउने गर्दा खर्छ निकै कम आउँछ र सजिलो पनि हुन्छ। यस उदाहरणमा जस्तै अत्याधिक अवस्थाहरुमा क्लाउड कम्प्युटिंगले ठुलो सहयोग पुर्याउँछ।
क्लाउड कम्प्युटिंगमा कम्प्युट शक्ति(पावर), भण्डारण(स्टोरेज), एप्लिकेशन, नेटवर्किंग, एन्यालिटिक्स जस्ता सेवाहरु प्रदान हुन्छ। यी मध्ये सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिने कम्प्युट पावर र स्टोरेज हुन्। कम्प्युट पावर को बारेमा कुरा गर्नु पर्दा, कम्प्युट पावर भनेको यान्त्रिक श्रोत हो जसको आवस्यकता कम्प्युटर मा कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न चाहिन्छ; चाहे त्यो इमेल खोल्न होस् या अनलाइनबाट केही खरिद गर्न होस्। क्लाउडमा जसलाई जसरी काम गर्न मनलाग्छ त्यस्तै खालको काम गर्ने वातावरण हुन्छ। यदि कसैलाई नयाँ डेस्कटप पूर्ण नियन्त्रणका साथ चाहिन्छ भने, ग्राहकले भर्चुवल मशिनको प्रयोग गर्न सक्छन्। भर्चुवल मशिन भनेको असली कम्प्युटरको अनुकरण हो जसको आफ्नै अपरेटिंग सिस्टमका साथसाथै ग्राहकले चाहेजस्ता अन्य एप्लिकेशन राखिएको हुन्छ। क्लाउडमा हामीले अपरेटिंग सिस्टम र तिनका लाइसेन्सको चिन्ता लिनु पर्दैन। साथै हामीलाई कुनै हार्डवेयरको आवश्यकता पनि पर्दैन। क्लाउड विक्रेताले यी उपकरणहरु आफ्नो डाटा सेन्टरमा होस्ट गर्छन। यो कारणले भर्चुवल मेशिन बनाउनु नयाँ कम्प्युटर किन्नु भन्दा फाइदाजनक हुन्छ। साथै, यसमा हामीले हार्डवेयर पनि आफुले खोजेको क्षमताको राख्न सक्छौँ। भर्चुवल मेशिन (भी एम) मात्र नभएर कम्प्युट पावरका लागी कन्टेनर र सर्भररहित कम्प्युटिंगका तरिकाहरुपनि उत्तिकै लाभदायी छन्। कन्टेनर भनेको यस्तो मंच(प्लेटफर्म) हो जसले कुनै एप्लिकेशन कार्यान्वायन गर्ने एकल वातावरण बनाईदिन्छ। डकर जस्ता कन्टेनरहरु अज्योरबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। कन्टेनरहरुले एप्लिकेशनहरु फरक वातावरणमा प्रसारित(डेप्लोय) गर्न सरल बनाइदिन्छन्। कन्टेनर मात्र नभई सर्भररहित कम्प्युटिंग पनि निकै प्रयोग हुने गर्छ। सर्भररहित कम्प्युटिंग भनेको एप्लिकेशन को कोड सर्भर नबनाई चलाउनु हो। उदाहरणका लागि कुनै सामानको खरिद पछि आउने इमेल पुष्टिकरणलाई लिन सकिन्छ। क्लाउडमा सर्भररहित कम्प्युटिंगको रकम गणना फंक्सन कलको आधारमा हुन्छ भने भी एम र कन्टेनरको रकम गणना सक्रिय समयको आधारमा हुन्छ। भण्डारण वा स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने हामीसंग धेरै प्रकारका डाटाहरु हुन सक्छन् जसलाई हामी फरक तरिकाले स्टोर गर्न चाहन्छौँ। क्लाउडमा फोटो र भिडियोहरु एउटा डिस्कमा राख्न सकिन्छ भने रेकर्ड फाईलजस्तो डाटालाई डाटाबेसमा राख्न सकिन्छ। यी सबैको प्रमुख फाइदाको कुरा गर्ने हो भने यी सेवाहरु हामीले आफैले रोजेको क्षमताको लिन सकिन्छ र त्यहि हिसाबको भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
कहाँ छ क्लाउड?
हामीलाई अचम्म लाग्ला कि लाखौँ व्यक्ति र संस्थाहरुलाई क्लाउडले सेवा कसरी दिन सकिरहेको छ। यदि कुनै एक ठाउँ बाट यी सेवाहरु उपलब्ध गराईरहेको हो भने त्यो अतिनै ठुलो ठाउँ हुनु जरुरी छ र त्यहाँ अतिनै धेरै र ठुला उपकरणहरु हुन जरुरी छ। क्लाउड शब्दलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुपर्दा त्यसको अर्थ बादल निस्किन्छ। तर कम्प्युटरीय जगतमा क्लाउड भनेको बादलमा नभई पृथ्वीको अनेक भौगोलिक क्षत्रहरुमा रहेको हुन्छ। यी भौगोलिक क्षत्रहरुमा थुप्रै डाटा सेन्टरहरु हुन्छन। यी सबै डाटा सेन्टरहरुको संजालले क्लाउड बनाउँछ। यी डाटा सेन्टरहरु प्राकृतिक दृस्टीकोणले सुरक्षित ठाउँहरुमा बनाइन्छन्। यसरी बनाईएका डाटा सेन्टरहरुमा प्राकृतिक प्रकोपहरुको जोखिम नहुने करण व्यक्ति वा संस्थाको अत्यावस्यक डाटाहरुपनि पूर्णत सुरक्षित हुन्छन। साथै विश्वका धेरै ठाउँमा सेवा दिन खोज्ने संस्थाहरुलाई सजिलो पर्न जान्छ।
समग्रमा हेर्नुपर्दा क्लाउड कम्प्युटिंग भनेको कम्प्युटरीय सामग्री अनलाइनबाट भाडा मा लिने र प्रयोग गरेको अनुसार रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया हो। साना नवसंचालित कम्पनी (स्टार्टअप) देखि लिएर ठुला ठुला कम्पनीहरुले समेत क्लाउड बाट लाभ लिन सक्छन। यस लेखमा हामीले क्लाउडका बारेमा केही जानकारी हरु प्राप्त गरेउं। अबको लेखमा हामीले माइक्रोसफ्ट अज्योरको बारेमा चर्चा गर्ने छौँ।
अज्योर क्लाउड कम्प्युटिंग
Millennium Challenge Corporation (MCC) Controversy in Nepal
Open Mic : Tea & Poetry Night at Bikalpa Art Cafe
Shrinkhala Made it Through, Secures her spot in Miss World 2018 Final
Far-western University (FU) Details – University of Nepal
Nepal Lost Miss World Head to Head Challenge, But still don’t lose hope
Steps to Win Miss World and List of Event Winners 2018
Voting lines for Head to head challenge for Miss World is EXTENDED
Top 10 Best Laptop Under 1 Lakh in Nepal List
Kalapani Belongs to Nepal – A Brief History of Kalapani
कता हरायो १०,०१९ वर्ग किमि नेपाली भूमि?